Maamulka Galkacayo ee Puntland oo DF ku eedeyey in ay Galmudug ku taageerto dal-durugsi (MAQAL) – Radio Daljir
Seteembar 16, 2013 5:24 b 0
Galkacayo, September 16, 2013 – Duqa degmada Gaalkacayo Axmed Cali Salaad ayaa maanta si wadajir ah maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka ah, wuxuu ugu eedeyey dagaalada ku soo noqnoqonaya deeganada miyiga ah ee gobolka Mudug.
Axmed Cali Salaad duqa Galkacayo isagoo la hadlayey Radio Daljir, wuxuu sheegay in maamulka Galmudug oo had iyo jeer ku soo xad-gudbo deeganada Puntland, Duqa wuxuu sheegay in ay ka soo talaabaan dadka Galmudug xuduud beenaadyo horey guumaysuhu u dhex-dhigay beelaha gobolka.
Duqa Galkacayo wuxuu kaloo sheegay in qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay maamulka Galmudug ku taageeraan dal-durugsi, taas oo markasta sahasha in dagaal beeleedyo iyo dilal ay ka dhacaan miyiga Mudug.
Sidoo kale duqa Galkacayo ee dhinaca Galmudug Bile Bashiir oo isna la hadlay Radio Daljir ayaa beeniyey in ay jirto isgarabsi ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug, kaas oo laga leeyahay dano dal-durugsi, taas bedelkeeda wuxuu ku baaqay amni iyo wada noolaansho.
Mudane Bile wuxuu sheegay in maamulka Galmudug ay haatan wadaan qorshe lagu doonayo in nabad lagu raadiyo si aysan mar dambe u dhicin dilal iyo dagaalo dhex-mara reer guuraaga gobolka Mudug, isagoo hadalka duqa Galkacayo ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo xaalad kale abuuri kara.
Wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Maxamuud Baasto ayaa shalay sheegay in ay diyaariyeen ciidamo boolis ah oo ka hortegi doona dagaalada dhex-mara reer miyiga mudug, sidoo kale wasiirka amniga iyo DDR-ta ee Puntland Khaliif Ciise mudan ayaa isna shalay Galkacayo ka sheegay in ay Galmudug kala hadli doonaan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada iyo dilalka ka dhaca miyiga.
DHEGEYSO: Duqa Galkacayo Axmed Cali Salaad oo u waramay Jamaal Faarax oo daljir ka tirsan